देशको रक्षा र प्रतिगमन परास्त गर्न माओवादीले नेतृत्व गरिरह्यो : प्रचण्ड (अन्तर्वार्ता)
प्रचण्डले अहिलेको निर्वाचन विगतको भन्दा फरक भएको र अहिले प्रतिगमनलाई परास्त गरी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने निर्वाचन भएकाले परिवर्तनका पक्षधरलाई नै मत दिएर जिताउन पनि आम मतदातालाई अपिल गरेका छन्। प्रस्तुत छ, अध्यक्ष प्रचण्डसँग स्थानीय तह निर्वाचनका केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
अहिले पनि दुइटा गठबन्धन जस्तो भएको छ, दुइटा मोर्चा जस्तो भएको छ यस पटकको निर्वाचनमा। एकातिर संविधानका मूलभूत विशेषता र मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्ति र त्यस किसिमको मोर्चा अगाडि आएको छ भने अर्कोतिर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको क्रममा लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको रक्षा र राष्ट्रको रक्षा गर्ने भनेर गठबन्धन बन्यो- वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन। यी दुई गठबन्धन आमनेसामने छन्। त्यसकारण यो पटकको निर्वाचनको मूलभूत विशेषता संविधानका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने र अझ परिमार्जन गर्ने एउटा विचार, प्रवृत्ति। अर्कोतिर, यो संविधानलाई उल्ट्याउन खोज्ने र देशलाई कहीँ न कहीँ पछाडि धकेल्न खोज्ने प्रवृत्ति अर्कोतिर भएर चुनाव भइरहेको छ। बीचमा अरूहरू जो साना पार्टीहरू छन्, तिनीहरूको खासै यसमा तात्विक भूमिका हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण एउटा प्रतिगमनकारी र अर्को अग्रगमनकारी बीचको संघर्ष नै यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्म पुग्दा पनि यही दुईटा प्रवृत्ति र दुइटा मोर्चाकैबीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ।
अहिलेसम्म नेपालमा जुन परिवर्तनका एजेण्डाहरु छन्, त्यसको सूत्रधार माओवादी केन्द्र र त्यसको नेतृत्व तपाईंलाई जान्छ। तर, निर्वाचनमा गठबन्धन बन्दै गर्दा र उम्मेदवार मनोनयन गर्दै गर्दा माओवादीले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्यो तर नेतृत्व त छोडियो भन्ने आलोचना छ नि ? यो नारा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
यो विषय अलि गम्भीर र संवेदनशील विषय छ। पहिलो कुरा, नेतृत्व भनेको के ? नेतृत्व भनेको विचारको नेतृत्व, राजनीतिक मुद्दाको नेतृत्व, देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोड दिने, गति दिने नेतृत्व त्यसरी भनियो भने माओवादीले नेतृत्व कसैलाई पनि छोडेको छैन। माओवादीले नै नेतृत्व गरिराखेको छ। तपाई हेर्नुभयो भने यो गठबन्धन निर्माण कुन परिस्थितिमा भयो ? प्रतिगमनको खतरा कहाँसम्म पुगिसकेको थियो र देश दुर्घटनामा जानै लागेको बेलामा कसको पहल र नेतृत्वमा यसको रक्षा भयो भनेर तपाईंले हेर्नुभयो भने चाहे सडक आन्दोलनमा हेर्नुस्, चाहे गठबन्धन निर्माण प्रक्रियामै हेर्नुस् माओवादी केन्द्रले नै नेतृत्व गरेको छ। अहिले निर्वाचनको यो समग्र प्रक्रियामा पनि हामीले नेतृत्व नै गरिराखेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ। मानिसहरू जसले यसको गहिराइमा गएर चीजलाई बुझेका छैनन् या बुझ्न चाहेका छैनन्, उनीहरूले लगाउने आरोप या प्रश्न त एउटा कुरा हो। तर, मेरो ठाउँबाट मैले हेर्दा यो समग्र प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिराखेको छ।
त्यस्तो होइन। त्यसो भन्यो भने त कोही पनि नसक्ने भयो। हिजो काँग्रेस हामीसँग किन मिल्यो ? एमाले हामीसँग फेरि किन मिल्न परेको हो ? तपाईंको प्रश्नअनुसार त कोही पनि एक्लै लड्न सकेनन् नि। अहिले हाम्रो गठबन्धन छ, एमाले शुरु शुरुमा भन्ने गर्थ्यो, हामी त एक्लै लड्छौं। अहिले त झन् ८/९ वटा पार्टी/समूह नै जम्मा गरेर आयो। उसले पनि एक्लै लड्ने हिम्मत गरेन। उसलाई पनि चाहियो गठबन्धन। काँग्रेसलाई पनि चाहियो गठबन्धन। त्यसैले माओवादीलाई मात्रै चाहिएको भन्न मिल्छ र ? बरु माओवादीले त यो सबै प्रक्रियाको नेतृत्व लिएर अगाडि पो बढेको छ। त्यसलाई हेर्न पर्‍यो। त्यसकारण हाम्रो संविधान र हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जस्तो छ, त्यसले गठबन्धन आवश्यक बनायो।
अर्को कुरा, गठबन्धन फेरि कुन विचारको आधारमा, कुन राजनीतिक एजेण्डाको आधारमा भन्ने हो। अहिले मैले हेर्दा जो शान्ति सम्झौताका पक्षमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छन्। हिजो १२ बुँदे समझदारीदेखिका यात्रीहरूबीचको गठबन्धन वैज्ञानिक, स्वाभाविक र गतिशील गठबन्धन हो। त्यसको विरुद्ध जाने गठबन्धन प्रतिगमनतिर जाने गठबन्धन हो। त्यसकारण यहाँ माओवादी मात्रै एक्लै आँट नगरेको भन्ने होइन। एक्लै त कसैले आँट गर्ने स्थिति छैन अहिले देशको। हामीले भनेका छौं यदि निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुने हो भने यो स्थिति हुँदैन। सबै आ-आफ्नो शक्ति अनुसार लड्ने अनि त्यसपछि जति मत पाइन्छ, त्यहीँ मतभार अनुसार भागबण्डा हुन्थ्यो। त्यस्तो अहिले छैन। हाम्रो संविधान र निर्वाचन प्रणालीले नै पार्टीहरूलाई गठबन्धनमा जाने र गठबन्धनको आधारमा विचार र मुद्दा स्थापित गर्न प्रेरित गर्‍या छ। यसकारण यो सवाल माओवादी केन्द्रसँग मात्र होइन, सबै देशका राजनीतिक दलसँग हो।
माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय स्तरबाट घोषणापत्र जारी नगरी स्थानीय चुनावमा गयो भनेर केही आलोचना र टिप्पणीहरू भएका छन्, किन त्यसो गर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ ?
प्राविधिक रूपले तपाईंले भन्नुभएको कुरा र आएका टिप्पणी साँचो कुरा हो। किनभने निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा उम्मेदवारी दिँदा एउटै पार्टीबाट भएमा एक पदमा महिला अनिवार्य भन्नेछ तर गठबन्धन गर्दा वा फरक पार्टीको हकमा पनि एउटा पदमा महिला अनिवार्य भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। गठबन्धनको कारणले कानुनतः महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने खतरा भएकै हो। हुँदो रहेछ। हामीले गठबन्धनमा छलफल गर्दा सकेसम्म महिलाको संख्या घट्न दिनुहुँदैन भनेर भनियो। अलग-अलग पार्टीबाट उम्मेदवारी दिँदा पनि एउटा पार्टीबाट पुरुष र अर्को पार्टीबाट महिला दिने व्यवस्था गरौं भनेर छलफल गरियो, मिलाउन कोसिस पनि गरियो तर गर्दा गर्दै पनि भनेजस्तो हुन सकेन। अझै भएको जस्तो लागेन।
देशका ६ वटा महानगर र ११ उपमहानगर र विशेषगरी भरतपुर जहाँ नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता बागीको रूपमा उठेको पनि देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारहरूको विजयको सुनिश्चितता कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ?
देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ नेपाली मतदाताहरू, आम नेपाली जनताले देशको राजनीतिक उतारचढाव, घुम्ती मोडहरू सबै अनुभव गर्नुभएको छ। बुझ्नुभएको छ। यो राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेला कसले बचाएको छ, कुन पार्टीले कुन नेतृत्वले भन्ने कुरा पनि गएको १५/२० वर्षको अवधिमा जनताले नजिकबाट अनुभूत गरेको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारण आम मतदाता जो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले गर्ने अपिल के हो भने यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने र सुदृढ गर्ने एउटा विचार, प्रवृत्ति र नेतृत्व छ भने अर्कोतर्फ एउटा यसलाई परिवर्तनलाई नरुचाउने र फर्केर पुरानै प्रवृत्तितिर लैजान खोज्ने, पुरानै निरंकुशता, पुरानै अराजकतातिर जान खोज्ने एउटा विचार प्रवृत्ति र नेतृत्व छ। आम नेपाली मतदाताले इतिहासको यो विन्दुमा उभिएर यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने जसमा नेपाली जनताका हजारौं छोराछोरीहरूले बलिदान दिनुभएको छ। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न, हजारौं बेपत्ता हुनुभएको छ, हजारौं घाइते अपांग हुनुभएको छ। र, लाखौं करोडौं यसमा सहभागी हुनुभएको छ। त्यसकारण यसको पक्षमा को छ र को छैन, को यसलाई रक्षा सुदृढ गर्न चाहन्छ र को यसलाई भत्काउन र सिध्यान खोजेको छ। यसलाई गहिरोसँग विचार गरी कसैको लोभ, लालच, दबाब, धम्की, प्रलोभन आदिको पछाडि नलागिकन आफ्नो अन्तरात्माको आवाज व्यक्त गरेर कसले राष्ट्र र जनतालाई एकतावद्ध पार्न खोजेको छ, कसले जनताको सेवा गर्न खोजेको छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर मतदान गर्न म सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।